Switzerland: Suisse Credit wuxuu hoos imaanayaa baarista MPC ee Bulgaariya “King of Coke” - TELES RELAY
ACCUEIL » International Switzerland: Suisse Credit wuxuu hoos imaanayaa baarista MPC ee Bulgarian "boqorka coke" kiiska
Sababta oo ah, Credit Suisse ma aysan dooneynin inay mawqif ka qaadato arrintan.
Credit Suisse wuxuu ku socdaa baaritaan dambi oo ay sameysey Wasaaradda Shaqada Dadweynaha (MPC) tan iyo markii 2013 ay ka dhacday dacwad lacageed oo la xiriirtay madaxweynihii hore ee Bulgaria 'king coke' Evelin Banev. Taasi waa waxa ay daraasadda Gotham City ka muujisay dukumiintiyada maxkamadda Switzerland iyo Talyaani. Ku lug lahaanshaha bangiga labaad ee ugu weyn dalka waligiis lama shaacin illaa iyo hadda.
Fur 1er Febraayo 2008, baaritaanka SV.08.007 ee federaalka ayaa muddo dheer ka baxsaday radaar media. 2014, a Maqaalka boostadalink dibadda sheegnay jiritaanka shabakadda Switzerland eeEvelin Banevlink dibadda, loo yaqaan "Brendo", oo looga shakisan yahay dhowr waddan oo Yurub ah inuu madax u yahay urur weyn oo dambiilayaal ah kuna hawlan ka ganacsiga maandooriyaha.
Sidoo kale 2014, saxafiga iyo qoraa Roberto Saviano wuxuu Evelin Banev ku tilmaamay "qof aad u muhiim ah" shabakadaha maafiyada Talyaaniga, "qof muuqaal ah oo gacantiisa ku haystay aayaha gobolka Bulgaariya gacantiisa".
In kasta oo muhiimada weyn ay leedahay arrintaan narcotrafic, doorka Credit Suisse waligiis umuu muuqan.
Iyadoo la raacayo codsiyadeena, MPC ayaa xaqiijisay, 1er Bishii Luulyo 2019, in baaritaanka shabakadda Evelin Banev "la kordhiyay bishii Nofeembar 2013 ee ka dhanka ah Bank Credit Suisse AG oo laga shakiyey anshax xumo la xiriirtay dambiga foosha xun ee sharci darrada ah. ".
Dhammaanteed waxay ku bilaabataa 2007 / 2008. Maamulka Bulgaria waxay ku eedeeyaan Banev iyo saaxiibbadiis la shaqeynayey shabakad ka ganacsiga maandooriyaha iyo adeegsiga maaliyadeed iyo qaab dhismeedka guryaha si ay ugu daboolaan hawlahooda. Sofia waxay caawimaad weydiisataa Switzerland.
MPC-da ayaa bilaabaya inay dan ka yeeshaan shabakadaha ururka. Qiyaasta baarayaasha: lacagta ka ganacsiga tahriibinta dhowr tan oo ah maandooriyaha ayaa dib loogu soo noolayn lahaa guryaha ku yaal Bulgaria, Spain iyo Switzerland, gaar ahaan Montreux iyo Geneva.
Mas'uuliyiinta Switzerland waxay billaabeen baaritaan bishii Febraayo 2008 waxayna joojiyeen tiro akoonno bangi ah oo laga furay magaca shirkadaha ay gacanta ku hayaan Evelin Banev iyo sidoo kale lammaanaheedii hore, Konstantin Dishliev, oo lagu dilay 2005 ee Bulgaria.
Swiiserland dhexdeeda, qabiilku wuxuu ku tiirsanaan lahaa nin aamin ah, ku takhasusay qaab dhismeedka maaliyadeed ee lacagta la dhaqay. Isku soo wada duuboo, toban shaqsi ayaa hada waxaa dacweynaya xeer ilaaliyaha dowlada dhexe.
* Waxaa aasaasay suxufiyiin baarayaal Marie Maurisse iyo François Pilet, Gotham City waa warside garsoor oo ku takhasusay dambiyada dhaqaalaha.
Toddobaad kasta, waxay u sheegtaa macaamiisheeda kiisaska musuqmaasuq, musuqmaasuq iyo lacago laaluush ah oo lala xiriirinayo xarunta maaliyadeed ee Switzerland, taasoo ku saleysan dukumiintiyada marinka maxkamadda ee dadweynaha.
Bil kasta, Gotham City waxay doortaa mid ka mid ah maqaaladeeda, oo ay ku kobciso waxayna siisaa marin bilaash ah akhristayaasha swissinfo.ch.
Laga soo bilaabo 2008, Talyaaniga ayaa sidoo kale xiiseynaya "Brendo" iyo ururkiisa. Wargeysyada ayaa ka hadlaya isbahaysi ka dhexeeya qabaa'illada 'Ndrangheta Calabria' iyo maafiyada Bulgaria. Evelin Banev ayaa ugu dambeyntii lagu xiray dalka Bulgaria. Bishii Maarso 2013, gabadhiisa waa afduubtaylink dibadda gudaha Sofia: waa farriin cad, oo amreysa ganacsaduhu inuu aamusnaado inta laga hor imanayo caddaaladda Talyaani, taas oo dalbanaysa in la soo celiyo.
Waxaa xukuntay maxkamadda Milan, "Brendo" waxaa lagu xukumay 20 sano oo xabsi ah. Xukunkaan waxaa ku buriyay 2015 Maxkmada Cassation, kahor intaan la xaqiijin Maxakamada Rafcaanka ee MaxNUMX.
Waxay si sax ah u tahay go'aanka Maxkamadda Cassation (documentlink dibadda) in magaca Su'aalaha loo yaqaan 'Credit Suisse' uu muuqdo. Si loo muujiyo xiriirka dhaqaale ee ka dhexeeya Evelin Banev iyo Matey Boev, oo loo tixgeliyo inuu yahay gacantiisa midig, garsoorayaasha Talyaanigu waxay xusayaan baaris ay ku sameeyeen mas'uuliyiinta Switzerland xafiisyada bangiga ee Zurich.
Sawirka maareeyaha maalka ee 'EB', baarayaashu Switzerland waxay ka helaan cadeynta akoon ay leedahay 'Gill Holding Finance SA' oo ay xukumaan Boev iyo xaaskiisa. EB, oo horey u ahaan jiray cayaaryahan tennis Bulgaria ah, oo hadda ah lataliye madax-bannaan, ayaa maareysey dhowr shirkadood oo si toos ah ugu xiran Evelin Banev.
Lacag bixinta udhaxeysa shirkadahaan waxay cadeyn u aheyd bangiga iyadoo la tashanaayo qandaraasyada. Maxakamadaha Talyaani, '' socodka maaliyadeed ee u dhexeeya dadka ka ganacsada darajooyinka sareeya '' malahan sabab la taaban karo oo waxay u adeegi jireen kaliya lacagaha la xareeyo.
Siyaasadda bangiga si loo eego
Bishii Abriil 2009, MPC waxay u kordhisay dacwadaha dambiyada illaa hoggaanka sare ee bangiga oo mas'uul ka ah macaamiisha Bulgaria. Waxay ka muuqataa hadalada dambe ee lagu xusay joogsi link dibaddaee Maxkamadda Dembiyada Federalka (TPF), in baananka la ogeysiiyay ku lug lahaanshaha macaamiisheeda qaar, oo ay ku jiraan Evelin Banev iyo Konstantin Dishliev, kiisaska maxkamadda, oo ay ku jiraan lacag laalista iyo ka ganacsiga maandooriyaha.
Sida ku xusan xukunka TPF, banki ayaa si habsami leh u ogeysiin lahaa jiritaankeeda, laakiin waligeed kuma kicin lahayd inay joojiso hawlaheeda macaamiisha ay khusayso. Waxaa ka sii xun: "Dilkii loo geystay ''lielielie' bishii May 2005, iyo hooyadii dambe ee guga 2007, duruufaha ugu yar ee aan caddayn (...), uma horseedin bangiga inuu dib u eego siyaasadiisa macaamiishaas. tusaale ahaan, MROS [Xafiis Isgaarsiin Lacageed] isgaarsiin lama qabanayo. "
In kabadan 10 sano kadib bilawga baaritaanka iyo sanadihii 6 kadib markii loo kordhiyay Kiiska Suisse, nidaamka wali waa socdaa. MPC-da ayaa dib u soo celisay u maleegayay eedeymaha baanka iyo sidoo kale tobanka qof ee wali baaris lagu wado.
Waxaa weydiiyay Gotham City, Credit Suisse ma uusan dooneynin inuu hadlo.
foomka rukunka - Faransiis
Isu soo qor wargeyskayaga bilaashka ah waxaadna ka heleysaa maqaalladeena ugu fiican ee kuugu jirta sanduuqaaga.
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://www.swissinfo.ch/fre/blanchiment-d-argent_credit-suisse-sous-enqu%C3%AAte-du-mpc-dans-l-affaire-du–roi-de-la-coke–bulgare/45093356
Morocco: Halkan waxaa ah shaqo bixiyaha ugu weyn ee qaranka Morocco